SEENAA Y.G (2005) kutaa 2ffaa fi xumuraa.
Ilkaan socha’ee buqqisuutuu furmaata !! jedhee katabbii kiyya kutaa 2ffaa osoo qopheessaa jiru, wayyaaneen Ibsa haaraa baafatte. Innis QEERROO qorachuu fi tarkaanfii irratti fudhachuuf haala mijeeffachaa jiraachu. Jarri kun dhugumatti waan qabanii fi gadhiisan dhabanii jiran. Akka Ihaadeegitti , Dirree Dimokiraasii bal’isuuf murteessinee fi Hidhamtoota Siyaasaa hiikuuf murteessinee ega jedhanii, kunoo torban osoo hin guunnee, Dirree Dimkiraasii dhiphisuu fi Namoota mana hidhaatii baasuuf deeman bakka buusuuf , Qeerroo Oromoo irratti labsa Obsa nama fixachiisuu baafatii jiru. Akka yaada kiyyaatti , Ibsa Ihaadeeg irraa waa eeggachuu dhiifnee, Qabsoo jabeessuu qofaatu murteessaadhaa Ega isaanuu fidanii nuutii waan harka keessa qabannuu hin qabnuu, amma maxxanfamuu danda’uun isiniif katabaa. Isa kaan garaatu beekaa waan ta’eef.
Wayyaanee Ihaadeeg IBSOOTA wal diigan lama baatii keessa jirru kanatti gurraan nu ga’ee jira. Akkasumas hammeenya ofiin hojjataa jiru saaxileera. Ihaadeeg torban tokko guutuu waan Ummataaf waadaa seenee hundasaa deebisee diigeera. Waan akka guutummaatti akka sangaa qalmaaf hiriireetti tarree galanii nu ibsan ofiima isaaniin diiganiiru. Torban kana wal ga’iin Mummiicha Ministeeraa fi Humna waraanaa,,,,,Humna Tikaa,,,Polisii Fedaraalaa fi namoota amanamoo walitti dhufanii gaggeessaa jiran, murtiilee Ihaadeeg guutummaatti diigaa jira. Biyyattii humna waraanaa jala galchuuf jiran. Humni waraanaa fi Polisiin Fedaraalaa akkasumas, humni Tikaa Ol aantummaa Tigirootaa kabachiisuuf sochii addaa gaggeessuuf murteeffataniiru. Isaan waan barbaadan murteessaniis, adeemsi Qeerroo irratti eegalamee , inumaa Qabsoo Oromoo galiin ga’uuf akka nu gargaaru hubannee, irratti hojjachuun hedduu barbaachisaadhaa.
Amma wayyaaneen Sarara isaaniif sararree bira ga’anii irra dabranii jiran. Qeerroo Oromoon qabanii waan gochuuf deeman beekamaadhaa. Wayyaaneen waan torban kana keessa murteessitee osoo hin taanee, madda Qeerroo karaa Polisii Oromiyaa basaasisuu yaaltee harkatti fashalee waan har’aa jedhan kana milkeessuuf turan. inni kunis hangamuu jabaatu fashalsuu irratti hojjannaan waan salphaatti irra aanuu dandeenyudhaa. Adeemsi kun kan duraa irra adda ta’uu mala. Amma adeemsii diinaa addummaa qabaachuu danda’aa. Nuutis adeemsa keenya adda taasisuu qabnaa. Kun waan amma nu irratti raawwatuuf yaadan kun caalaatti Ummata dheekkamsiisee akka jiru irratti hojjachuudhaa. Ibsa Polisii Fedaraalaa Mormuu eegalee, Lammiilee Tigiraayi irratti haala tarkaanfii isaanii keessa deebi’anii ilaalan gaggeessuun irratti hojjachuudhaa.
Amma dubbiin akka marsaa duraa hin taatuu. Gara jabiina keenya dabaluu qabnaa. Hiriira mormii Polisii Fedaraalaa irratti haala adda ta’een gaggeessuun eegallee, humna QEERROO ol baasuu qabnaa . QEERROO jechuun Oromoof maal jechuu akka ta’ee beeksiisuu qabanaa. kana waliin OPDOta wayyaaneen itti abdattu dhabamsiisuudhaa. Waraanaa Ummata keessa seenee waa tu’achuu barbaadu, ummata magaalaa irratti hirmaachisanii akka ba’an taasiiuudhaa. Sochiin wayyaanee QEERROO qaluuf itti seentuu kun, ka dhumaatii. Kana injifannee jennaan, wayyaaneen yaalii ishee isa xumuraa gadhattii jechuudhaa.
Polisiin Fedaraalaa waan amma Qorachuun barbaada jedhuu kana ega irratti hojjachuu eegalee baatiilee 5n tokko dabraniiru. Amma ummata dorsiisuuf Dargaggoota hidhuu fi dorsiisuu danda’uu ta’aa . garuu namni tokko hidhamnaan , waliin deemanii hidhaatii baasuutuu furmaata. Ammatti polisiin Fedaraalaa kan waliin socha’uu barbaadu, Bulchiisa aanaa fi gandaa akaksumas, humna waraanaa qubatee jiru waliin qorannoo gaggeessuu barbaadan. Kana jechunun OPDO bakka lamatti qoodanii jiru jechuudhaa. Kanaaf waan asi keessatti nu faayyaduu danda’uu hojjachuu qabnaa.
Wayyaaneen yaaddoo guddaa keessa seentee jirtii. Polisiii Fedaraalaan Dhimma Naannoo tokko qorachuuf murteeffannaan, jalqabarra ka jiru, wal amanuun akka hin jirreedhaa. Polisii Oromiyaa shakkaniiruu jechuudhaa. Kanaaf qaawwaa qaban kanatti dhimma haa baanuu.Heerri Biyyattiillee cabeera. Caffeen Oromiyaa illee kana mormuu danda’aa. Maaliif jennaan namni isa gaafatee hin jiru. Hojjattoota mootummaa kana yoo balaaleffatan QEERROOf gumaachaa guddaa taasisiisu. Akka Ummataatti Polisiin Fedaraalaa Oromiyaa keessa seenuu hin qabuu jennee mormuun isa jalqabaatii. Lbsiin wayyaanee waggaa 25 bishaan dhugeera. Naannooleen Leenca ilkaan hin qabnee ta’aniiru. Oromiyaa keessatti sochii taasifnuu tarkaanfii fi haala isaa daran jabeessuu abrbaachisaa.
Sochiin keenya kana caalaa hammaachuu qabaa. Gonkumaa duubatti hin deebinuu. Qabeenyaa fi ilmaan Tigiree yeroon isaa ga’uu ifatti Oromiyaa keessatti itti himuu wayyaa. POLISII FEDARAALAAf Oromiyaa keessatti , ibidda faana itti ta’uu qabnaa. Miidiyaalee wayyaanee, EBS,EBC, JTV, WALTAA, ENN, kkf Oromiyaa keessatti akka hin sochoonee fi ummata hin haasofsiifnee taasisiuudhaa. Kanarra ibsamuu baatuus, wayyaaneen Daangaa keessa keenyaa ca’ee jirtii. Kanarra callisuuf gatii hin qabuu, QABSOO ISA HIN HAFNEE SAN ASI HARKISUUTUU FURMAATA. Maaliif jennaan, Ilkaan socha’ee, buqqisuutuu furmaata waaraa argamsiisa waan ta’eef.
Dhuma irratti waan hubannoo tokko waliif dhaamnaa. Wayyaaneen Ibsa wal ga’ii Torban sadii hojiirra olchinaan Isheematu bada. Wayyaaneen kana booda akka ofii isheef ta’utti humnaan buluu malee, gonkumaa waan dubbattu kanaan jiraachuu hin dandeessu. Kana hubadhaa. Daldala siyaasaaf kana murteessinee jedhanii lallabaa jiru. Dimokiraasii bal’ifnaan isaanumatu bakka gadhiisaa jechuudhaa. Kana akkamiin hayyamuree ?
Kanaaf qabsoo FILANNOO LAMMAFFAA eegaluun yeroo isaatii .
HORAA BULAA LAMMII KOO !!1